शंकर पाेख्रेलः नेपालज्यू एमालेविरुद्ध घात भएन ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsशंकर पाेख्रेलः नेपालज्यू एमालेविरुद्ध घात भएन ?
शंकर पाेख्रेलः नेपालज्यू एमालेविरुद्ध घात भएन ?
नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रचण्डसँगको सहकार्यबारे प्रश्न गरेका छन् । उनले आइतबार सामाजिक सन्जालमार्फत नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निरन्तर सहकार्यमा रहेको भन्ने नेपालको अभिव्यक्तिले तत्कालीन एमालेविरुद्ध घात भएन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
“माधव कमरेड तपाईंले जारी गरेको निर्देशनअनुसार तात्कालीक माओवादी उग्रवामपन्थको राजनीतिक विरोध र प्रतिवादले गर्दा कमरेड यदु गौतमलगायत तात्कालीक एमालेका झन्डै ५०० कार्यकर्ताले जीवन बलिदान गर्नुभएको थियो । तर आज तपाईं कमरेड प्रचण्डसँग सुरुदेखि नै सहकार्यमा रहेको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन वार्ता गर्नु र निरन्तर सहकार्य गर्नु फरक होला नि कमरेड । त्यतिवेला साँच्चै माओवादी नेता प्रचण्डसँगको सहकार्य रहनुभएको हो भने त्यो पार्टीविरुद्धको घात भएन र कमरेड ?’’ उनले सोधेका छन् ।
पोखरेलले प्रचण्डसँगको साँठगाँठको औचित्य पुष्टि गर्न आफ्नै मान्यताविपरीत नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्दै सुझावसमेत दिएका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी उग्रवामपन्थविरुद्ध वैचाारिक तथा राजनीतिक संघर्षमा रहेको कुरा छिट्टै बिर्सिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
“विधि र पद्धतिमा जोड दिने तपाईंले अहिले प्रचण्डसँगको साँठगाँठको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि आफ्नै मान्यताविपरीत नबोलेको भए हुन्थ्यो । शान्तिप्रक्रियामा प्रवेशपछि त हामी सबै सहकार्यमा होइन एकतामै बाँधिएका हौं,’’ उनले भनेका छन्, “त्योभन्दा पहिले लामो समयसम्म तपाईंकै नेतृत्वमा माओवादी उग्रवामपन्थविरुद्ध वैचाारिक तथा राजनीतिक संघर्षमा रहेको कुरा सत्य होइन र ? यति छिटै इतिहासको कटु सत्यलाई कसरी बिर्सन मिल्छ र ?”
Previous articleमाउन्ट केटुमा निर्मलसहित १० नेपालीकाे नयाँ रेकर्ड कायम
Next articleसाताकाे पहिलाे दिन सुनकाे मूल्यमा गिरावट, कतिमा हुँदैछ काराेबार?
लुम्बिनी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीमा शंकर पाेखरेल नियुक्त
शंकर पाेखरेलकाे नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमाले संसदीय दलकाे निर्णय